परमेश्वरको परिभाषा र अस्तित्व – भाग १ – Daily Devotion
परमेश्वरको परिभाषा र अस्तित्व – भाग १
Post author:Pradeep Thapa
आजभोली “परमेश्वर” शब्दको प्रयोग धेरै प्रकारले गलत अर्थमा भएको छ । ईसाई जगतमा परमेश्वर शब्द सही ढङ्गमा बुझ्न आवश्यक छ । यस शब्दको केही बेठीक बुझाईहरु यहाँ प्रस्तुत गर्न कोसिस गरिएको छ ।
दार्शनिक र ईश्वरशास्त्रीहरुले आ–आफ्नै विचारअनुसार परमेश्वरलाई व्याख्या गर्ने प्रयसा गरेका छन् । प्लेटो को अनुसार परमेश्वर भनेको आदिदेखिको विचार हो जसले असर कुरा बनउनुभयो । एरिस्टोटल का अनुसार परमेश्वर “सबै प्राणीको जग हुनुहुन्छ ।” स्पाइनोजा का अनुसार उहाँ “एक सिद्ध तत्व हुनुहुन्छ, जसद्वारा सबै कुरा अस्तित्वमा आयो र उहाँ सबैथोक हुनुहुन्छ अर्थात् सम्पूर्ण थोकहरु उहाँका भिन्न रुपहरु मात्र हुन् ।” लेइब्निज भन्छन् कि सबै कुराको कारक भनेको परमेश्वर हो । कान्ट का अनुसार परमेश्वरको समझ र इच्छाद्वारा प्रकृती बनियो; उहाँ यस्तो प्राणी हुनुहुन्छ जससँग अधिकार छ तर जिम्मेवार छैन । उहाँले पृथ्वीमा नैतिकता सृजना गर्नुभयो । फिस् का अनुसार परमेश्वर सम्पूर्ण आकाशमण्डलको नैतिक नियम हो, जुन मानिसमा काम गर्छ । हेगेल का अनुसार परमेश्वर एक आत्मा हो जसको चेतना छैन । तर मानिसको विचारमा चेतना जागेपछि उहाँको अस्तित्व आयो । मेथर का भनाइअनुसार, जो भूवैज्ञानिक थिए, परमेश्वर आत्मिक शक्ति हो, जो आफ्ना सृष्टिको क्रियाकलापमा संलग्न हुनुभयो । यस प्रकारका विश्लेशणहरु मानिसहरु इतिहासका विभिन्न कालखण्डाम गर्र्दै आएको छन् ।
बाइबलिय परमेश्वरको नाम
ईश्वरलाई जनाउने एक महत्वपूर्ण नाम एल हो, जसबाट एलीम, एलोहिम र एलोआ उत्पन्न भयो । ईश्वरको दर्जामा समावेश प्रत्येक सदस्यलाई जनाउने साधरण शब्द यहि हो । पुरानो करारमा प्रायजसो बहुवचन शब्द एलोहिम प्रयोग भएको पाउछौँ जसले एक परमेश्वरको विचार प्रस्तुत गरेको छ । यद्धपि यो शब्दले परमेश्वरलाई जनाए पनि कहिलेकाहिँ अन्य देवीदेवतालाई पनि प्रयोग गरिएको छ । मिश्रित शब्द एल–एल्योन ले उहाँ सर्वोच्च परमेश्वर भनी जनाउँछ (भजन ७८ः३५) । एल–सेदाई ले सर्वशक्तिमान परमेश्वर जनाउँछ (उत १७ः१) । यहोवा भनेको इस्राएलको श्रेष्ठता बुझाउने उहाँको व्यक्तिगत नाम हो ।
परमेश्वरको अस्तित्वको जनाउने केही तर्कहरु
यो कुरा स्पष्ट छ कि परमेश्वरले आपैmलाई प्रकट गर्नुभएको छ र मानिससँग उहाँको अस्तित्व बुझ्ने क्षमता छ । यहाँ परमेश्वरको अस्तित्वको विषयमा केही तर्कहरु छन् ।
क. परमेश्वरको अस्तित्व स्वविवेकबाट थाहा हुन्छ
स्व–विवेक भन्नाले कुनै ठोस प्रमाण नभएपनि विश्वव्यापि रुपमा मानिलिएको र आपूmभित्र प्रष्ट भएको सत्यता हो । पावल लेख्छन्, “परमेश्वरको विषयमा जान्न सकिने कुरा तिनीहरुमा प्रष्टै छ, किनकि परमेश्वरले उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारका सृष्टिदेखि नै बनाइएका थोकहरुमा छर्लङ्गै देखिएको छ । यसैले यिनीहरुलाई कुनै किसिमको बहाना छैन” (पद २०) । एकदम अज्ञान व्यक्तिले पनि यो जानेको हुन्छ कि पापाम जिउने व्यक्ति “मृत्युको योग्य” हुन्छन् (रोमी १ः३२) र “व्यवस्थाले चाहेका कुराहरु आफ्ना हृदयमा लेखिएका हुन्छन्” (रोमी २ः१५) ।
इतिहासले देखाउछ कि हाम््रो स्वभावको धार्मिक पक्ष पनि समाजिक पक्षजस्तै विश्वव्यापि छ । विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापमा सचेत र अलौकिक कुराहरप्रतिको विश्वास अभैm मानिसको मनमा अनि हाम्रो समाजमा छदैछ । अविश्साको कारण मानिसको धर्मको पतन हुँदै गएको छ । जब मानिस परमेश्वरलाई इन्कार गर्छ, पावल लेख्छन्, “तिनीहरु आफ्ना विचारमा बेकम्मा भए, र तिनीहरुको मुर्ख मन अझ अँध्यारो भयो । बुद्धिमान् छु भन्ने दाबी गरे तापनि तिनीहरु मुर्खै भए, र तिनीहरुले विनाशी मानिस, चराचुरुङ्गी, चारखुट्टे जनावर र घस्रने जीवहरुका मूर्तिका रुपसँग अविनाशी परमेश्वरको महिमा साटफेर गरे” (रोमी १ः२१–२३) ।
परमेश्वरको अस्त्वितमा विश्वास गर्न आवश्यक छ, किनभने हामी प्राकृतिक नियमहरु भङ्ग गरी उहाँको अस्तित्वलाई अश्विकार गर्नै सक्दैनौ । हामीले अश्विकार गरे तापनि यो जबरजस्ती र क्षणिक मात्र हुन आउछ । यद्धपि मानिसको अविश्वास केही समयको लागि दैविय तत्व, वा नैतिक जिम्मेवारीलाई इन्कार गर्न सक्ला, तर अविश्वासका कारणहरु आफ्नो मगजबाट हटेपछि मानिस आफ्नो सुरुको अवस्थामा आउदछ । हुनसक्छ मानिसको हात खस्रो भएर छुन सक्ने क्षमता गुमाउला तर यसको मतलब यो होइन त्यस हातले छुन सक्ने अङ्ग होइन ।
परमेश्वरले आफ्ना प्रकाशहरु पुस्तादेखि नै दिदै आउनुभएको छ । तर उहाँमा विश्वास गर्नुको आधार यी प्रमाणहरु मात्र होइनन् । किनकी बाइबलमा भनिएको छ कि परमेश्वरको व्यवस्था मानिसको हृदयमा लेखिएको हुन्छ (रोमी २ः१४—१६) ।
Tags: evidence of God, existence, names of God
हाम्रो आत्मिक आमा (गला ४ः२०-३१)
इस्राएलीहरुबाट हामी के सिक्न सक्छौँ ? (यहूदा ५)
झूटा शिक्षा कसरी चिन्ने ? (यहूदा ३-४)
व्यवस्थाको उदेश्य (गलाती ३ः११-२१)
धर्मीचाँहि आफ्नो विश्वासद्वारा जिउनेछ
किन पावलले पत्रुसको विरोध गरे (गलाती २ः११-२१)
यरुशलेमको निम्ति प्रार्थना गर (भजन १२२)
Joshua on अन्यजातिहरुका निम्ति पावलको बोलावट (गलाती २ः १-१०)
A sinner saved by the grace of God. We have only one life and soon it will pass, only thing done for Christ will last.
Copyright © - Pradeep Thapa 2021